Nhau - "Kuwedzera" moto unodzora moto unounza kudzivirirwa kwepamusoro kwekudzivirira moto
Mumakore apfuura, nyika yakabhadhara zvakanyanya nekuchengetedza moto muzvirongwa zvekuvaka, uye huwandu hwakawanda hwezvinhu zvekudzivirira moto zvaiswa mukuvakwa kweinjiniya. Db-a3-cd01 bhegi rinodzima moto mhando nyowani yemoto-chiratidzo chinotsigira chinogadziriswa chakagadzirwa nekambani yeWeicheng zvinoenderana neyakajairwa nyika ye gb23864-2009 (isina moto plugging zvinhu). Chimiro che db-a3-cd01 bhegi rinodzimisa moto senge mutsago mudiki, iro rekunze rakagadzirwa neyakagadziriswa girazi fiber jira, uye mukati izere nemusanganiswa wezvinhu zvisina kupisa zvisingatsve uye zvakasarudzika zvekuwedzera. Chigadzirwa hachina chepfu, hachina kunaka, hachina ngura, chinodzivirira mvura, chinoshingirira mafuta, chinopesana neHygrothermal, chando-chinonyungudika kutenderera uye hunhu hwakanaka hwekuwedzera. Inogona kubviswa uye kushandiswazve paunoda. Inogona kugadzirwa mumhando dzakasiyana dze firewall uye isina moto dura zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana nevashandisi, uye zvakare inogona kushandiswa kuvhara maburi anoda kurapwa kwemoto. Kana uchinge wasangana nemoto, izvo zvishandiso zviri mupakeji inodzima moto zvinopisa uye nekuwedzeredzwa kuita huchi hweuchi, ichigadzira rakamanikana rekuisa mucherechedzo kuti uwane kudzivirira moto uye kupisa kupisa, uye nekunyatso kudzora moto mukati meiyo renji. Kana iyo plugging ukobvu ichisvika 240mm, iyo moto yekudzivirira muganho inogona kusvika kupfuura 180min.
Bhegi rinodzima moto rinoshandiswa semadziro ekuparadzanisa panzvimbo pezvidhinha zvinokanganisa, slag donje, zvedongo makushe nezvimwe zvinhu munguva yakapfuura. Inofananidzwa navo, bhegi rinodzima moto rine zvinoshamisa kupisa kupisa maitiro.
Db-a3-cd01 moto unodzora moto package inokodzera kubaya kupinda kwakasiyana kwesimba, telecommunication, post, chemakemikari indasitiri, kuchera, bhizinesi, kuvaka uye epasi peinjiniya, sekudhonza kwemaburi akaumbwa panopinda seyetambo, mapaipi emafuta. , mapaipi emhepo, mapaipi emagetsi, mapaipi esimbi, nezvimwewo zvinopfuura nepakati pemadziro ekuparadzanisa kana chikamu chepakati, icho chinogona kumisa kupararira kwemurazvo, kunyanya chakanakira zvikamu zvakakosha zvekutsiviwa kwetambo.
Post nguva: Jul-13-2020